Dhakhaatiir yarida haddii la xallin waayo mala xeeladayn karaa? - BBC News Somali
Dhakhaatiir yarida haddii la xallin waayo mala xeeladayn karaa?
Dalka Maraykanka ayaa laga yaabaa in 50,000 oo dhakhtar ay ka yaraato tirada uu dalkaasi u baahan yahay meesha lagu gaaro sannadka 2030ka, sida ay rumaysan tahay shirkadda cilmi baarista samaysa ee IHS Markit.
Dhakhaatiir yarida ayaa meelo badan oo dunida ah dhibaato ku haysa.
Dalalka qaaradda Aasiya ku yaallana waxaa ka jirta dhakhaatiir yari, arrintaas ayaana horseeday in ay bataan dhakhaatiirta dhanka Online-ka ka hawl gala iyaga oo talooyin caafimaad iyo dawayn bixiya.
App-babka aad looga isticmaalo aasiya waxaa ka mid ah Halodoc, Doctor Anywhere, iyo Ping An Good Doctor.
Shirkad shaqaalaheeda ku qasabta in ay lugeeyaan
Meelo badan oo dhulka Soomaalida ka mid ah ayay dhibataadaasi dhakhtar la'aantu ka jirtaa, haddaba su'aasha meesha taalla ayaa ah haddii aan lahaynin xal dadka oo dhan dhakhaatiir loogu helo xeelado kale ma lala imaan karaa?
"Waa arrin aad u wanaagsan oo ay tahay in la dhiiri galiyo in dhakhaatiirtu ay la yimaadaan qorsheyaal ay bukaanka talooyin caafimaad kula wadaagayaan, haddii ay tahay khadka taleefanka ama dhanka internetka", ayuu yiri Sakariye Cabdi Xareed oo ah wiil dhallinyaro ah oo sannadkan ka qalin jabinaya dhakhtarnimo.
"Dad badan oo Soomaali ah ayaa safaro dhaadheer gala si ay talooyin caafimaad u helaan, kuwo kalana iyagoo u baahan ayayna u suura galin in ay dhakhaatiir talo ka helaan." Ayuu intaas ku sii daray.
Dr Maxamed Maxamuud Bidde ayaa isna qaba in arrintaasi ay wanaagsanaan lahayd dad badanna looga faa'iidayn karo, balse wuxuu sheegay in caqabadaha ka imaan kara ay tahay in dad badan aysan awoodin helitaanka internetka.
Lydia Campbell-Hill oo ah dakhtarad 35 jir ah oo ka hawl gasha England ayaa sheegtay in ay hadda dhanka Olineka ka shaqaysato arrintaasina ay nolosheeda wax ka badashay.
Lahaanshaha sawirka LYDIA CAMPBELL-HILL
"39 saac ama ka badan ayaan shaqayn jiray, haddana lacagta aan helo qayb badan oo ka mid ah waxaan ku bixin jiray in carruurta la ii xannaaneeyo, ayay tiri Lydia oo BBC-da u warrantay.
Ka dib markii ay shaqadaas ka tagtayna waxay sheegtay in ay dhanka Onlineka u weecatay ayna wax badan iska badaleen nolosheedii oo ay wakhti u heshay caruurteeda iyo nolosheeda kale.
"Xataa habeenkii marka uu wiilkayga yar seexdo dhawr saac ayaan shaqeeyaa oon dadka Onlineka kala taliyaa". Ayay tiri Lydia.
Haddii aan Afrika u soo noqo shirkadda taleefannada ee Safaricom ee dalka Kenya ka hawlgasha ayaa sannadihii u dambeeyay bixinaysay adeeg caafimaad, qofka bukaanka ah ayaana dhakhaatiirta wici kara iyagoo laga qaadayo 15 shilin, arrintaas ayaana ka dhigan in ugu yaraan lix ruux ay talooyin caafimaad ku heli karaan hal doolar.